Hospitaala Mooyyalee: Namoonni 8 du'an - BBC News Afaan Oromoo
Hospitaala Mooyyalee: Namoonni 8 du'an
Image copyright Huseen Halkanoo
Goodayyaa suuraa Walitti bu'iinsa magaalaa Mooyaleetti uummatootaa Boranaa fi Garrii gidduuti dhalate.
Walitti bu'insa Uummatoota Booranaa fi Garrii Godina Booranaa magaala Moyyaalee jiran gidduutti dhalateen gama lameeniinuu lubbuu namootaa irratti balaan qaqqabee jira.
Kana duras uummatoota lamaan gidduu dhimmoota akka lafa margaa, bishaanii fi daangaa irratti walitti bu'iinsi dhalatee akka beeku kan himan jiraattuun magaalaa Mooyyalee aadde Haliimaa Boruu walitti bu'insi kaleessaa wayita dargaggeeyyin gosa garrii dhakaan nama miidhuurraa gara meeshaa waraanaa dukaasutti ce'an cimee jedhan. Warri Booranaas ofirraa ittisaniiru jedhan aadde Haliimaan.
Walitti bu'iinsa Kanaan lakkoofsi namoota miidhamanii Hospitaalaa Moyyaaleetti geeffamanii turan shantama ta'uu fi isaan keessaa 8 lubbuun bahuu Itti gaafatamaa Waajira fayyaa Godina Booranaa kan ta'an Obbo Roobaa Dheengee galmee hospitaalichaa waabefachuun himanii jiruu.
Walumaa galatti namni miidhamee Hospitaala Mooyyalee seene gara nama shantamaati. Shantamii san keessaa gara nama saddeeti hin du'ee. kan du'ee dhufee fi erga Hospitaala gahee kan du'es jira. 13 gara Hospitaala yaa'abal'oo, Walaayittaa Soddoo fi Haawaasaa rifeer godhamaniiru. Madooleen Hospitaala Mooyyaleetti hafan 13'' jedhan Obbo Roobaa Dheengee.
Itti gaafatamaa Hospitaalaa Yaa'aball'oo kan ta'an obbo Areeroo Biiqicha ammoo namoota 11 refeeriidhaan gara Hospitaala isaanitti ergaman keessaa 2 lubbuun isaanii darbuu himaniiru.
Akka ragaan Hospitaal lameen irraa arganne mul'isutti Walumagalatti namoonni lubbuun darbe 10. Lakkoofsi kun kan gama lameeniinuu jiru ta'uu fi dhiisuu isaa mirkaneefachuu hin dandeenye.
Madda rakkoo kanaa fi balaa qaqqabe ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennan hoogganaa Komaand poostii naannoo sanii kan ta'an Ganaraal Geetaachew Guddinaa bibilaan dubbifne ammatti gaabaasa guutuu waan hin qabneef ibsa kennuu hin dandeenyu jedhaniiru.
Guyyaa har'aa manneen daldalaa fi hojii hedduun cufamanii kan oolan ta'uu fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa magaalittii to'atanii jiraachuu jiraattotni dubbifne dubbataniiru.
Hoogganaan Waajira Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo fuula feesbuuki isaaniirratti yaada maxxansaniin gochi kun kan balaalefatamu ta'uu eeruun ''qaamni ittigaafatamummaan itti kenname tarkaanfii barbaachisu fudhatee ammuma dhaabsisuu qaba'' jedhaniiru.
Madda walitti bu'iinsa kanaa fi miidhaa qaqqabe BBC'n qulqulleefachuuf hojechaa jira. odeeffannoo dabalataa akkuma arganneenis isin biraan geenya.
Hogganaan kominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a hidhaman
Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19'n qabamanii kuma tokko caale
'Mootummaan jijjiirameera miidiyaan hoo?'-Dr. Zennebee Beyyenee
Itoophiyaatti lakkofsi namoota Covid-19'n qabamanii kuma tokko caale
Doonaald Tiraamp hariiroo Ameerikaan WHO waliin qabdu adda kutan
Namni shamarree Haayimaanoot ajjeesuun shakkame to'atame jedhe poolisiin
Oromiyaatti nama 8 dabalatee namootni haaraan 137 Covid-19'n qabaman